एमसीसी समर्थक कुलमानलाई यस कारण भित्र्याउँदैछन् देउवा ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमसीसी समर्थक कुलमानलाई यस कारण भित्र्याउँदैछन् देउवा !
अहिले नेपालमा सर्वाधिक चर्चा, बहस र विवादको विषय वनेको विषय हो– सत्ता समिकरण । जुनसुकै सर्तमा सत्ता हात पार्ने र पदमा पुगीहाल्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय ब्याप्त छ। त्यसका पछाडि शक्ति राष्ट्रहरुले चलेखेल गरिरहेको आरोप पनि उत्तिकै छ।
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत आउन लागेको अमेरिकी अनुदान सहयोग र चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) रणनीति कारण नेपालको राजनीति दलदलमा फस्दै गएको आंकलन गर्नेको संख्या पछि धेरै छ।
देउवाको निर्देशनपछि उर्जामन्त्री भुसालले पनि तत्कालै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर पदबाट राजीनामा दिन भनिसकिन् । यसअघि पनि ४ वर्ष प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका घिसिङको कार्यकाल २८ भदौ ०७७ सकिएको थियो । २७ माघ ०७७ मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो।
तर, उनी यस परियोजनामा सुरुदेखि नै जोडिएका छन् । एमएमसीको मुख्य परियोजना नेपालको विद्युत विकाससँग सम्वन्धित छ । अमेरिकाले दिने ५० करोेड डलर अनुदानको ठूलो हिस्सा खर्च हुने भनेको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा)सम्म चार सय केभीको प्रशारणलाइनमा हो । प्रशारण लाइन भन्नेवित्तिकै त्यसको सिधा सम्पर्क विद्युत प्राधिकरण नै हुन्छ।
एमसीसी राष्ट्रहितमै रहेको घिसिङको वुझाई छ। आफु निकटकाहरुलाई उनले एमसीसीका कारण नेपाललाई कुनै नोक्सान नहुने वताउने गरेका छन् । एमसीसी प्रसारण लाईन सँग सम्बन्धित भएको र भारत संग व्यापार गर्नु पर्ने, बङलादेशसँग पनि बिद्युतको व्यापार गर्न भारतीय भुगोलको प्रयोग गर्नु पर्ने भएकाले भारतको चासो हुन स्वभाविक भएको उनी वताउँछन् । भारतप्रती इमान्दार रहेका उनी राष्ट्रवादी छवी प्रदर्शन गर्न चाहन्छन्। नेपालआज